PREMIER BANK OO XUJEYDA SANADKAN FURSAD U SIINAYA INAY LACAG-LA’AAN KU QAATAAN MASTERCARD KUNA ISTICMAALAAN - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
PREMIER BANK OO XUJEYDA SANADKAN FURSAD U SIINAYA INAY LACAG-LA’AAN KU QAATAAN MASTERCARD KUNA ISTICMAALAAN
Premier Bank wuxuu fursad u siinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibka Xajka inay si lacag-la’aan ah ku helaan Mastercard-ka Premier Bank. Wuxuu sidoo kale bankigu muddo 30 maalmood ah ka dhaafayaa xujeyda khidmadda wax ku iibsiga iyo lacag la bixidda Mastercard-ka.
Premier Bank Premier Bank waa banki ganacsi oo gaar loo leeyahay, isla markaana shareecada ay Islaamku asal u tahay dhammaan adeegyada uu bixiyo. Waxa uu shati ka heystaa Bankiga Dhexe ee dalku oo u sharciyeeyay in uu bixiyo adeegyo maaliyadeed iyo mid banki. Bankigu waxa uu xalal maaliyadeed oo dhammeystiran siiyaa macaamiisha oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay, hay’adaha dowladda ah, kuwa aan dowladda ahayn, shirkadaha waaweyn, shakhsiyaadka, ganacsiyada yar yar iyo kuwa waaweyn ee dalka. Adeegyada uu Premier Bank bixiyo waxaa ka mid ah adeegyada banki ee shakhsiyaadka, ganacsatada iyo shirkadaha, moobeylka iyo Internet-ka, mashiinnada ATM-ka, Lacag-dirista gudaha, dibadda iyo SWIFT-ga, wakiil bankiyeedka iyo dirista lacagaha ee heer caalmi.
XARUNTA DHEXE EE MUQDISHO:
XARUNTA DHEXE EE HARGEYSA: